Tattoo Serendipity, ka ogow wax walba oo ku saabsan ereygan xiisaha leh | Tattoo
Tattoo Serendipity, ka ogow wax walba oo ku saabsan ereygan xiisaha leh
Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid xasilloonida tattoo, qaybahaas oo ku saleysan eray ka yimid sheeko hore oo Beershiya ah taasina waxay tilmaamaysaa isku soo beegmid aan macquul ahayn.
Qodobkaan Waxaan ka hadli doonaa macnaha erayga waxaanan ku siineynaa xoogaa fikrado ah oo kugu dhiirrigelinaya kan xiga tattoo. Sii wad akhriska si aad waxbadan uga ogaato!
1 Serendipity, oo ah eray leh isir soo jiidasho leh
2 Qaar ka mid ah serendipities cajiib ah
3 Fikradaha qaarkood ee loogu talagalay tattoo
Serendipity, oo ah eray leh isir soo jiidasho leh
Xaqiiqdii, erayga serendipity Waa wax casri ah, maadaama aysan ahayn illaa 1754 in nuqulkeedii Ingiriisiga la soo saaray, xasilloonida. Waxa runtii xiisaha leh waa asalka ereyga ka dambeeya, maaddaama uu ku saleysan yahay sheeko qadiim ah oo Beershiya, Saddexda Amiir ee Serendip, oo ay halyeeyadu ku noolyihiin nooc qadiim ah deus ex machina oo ay ku xalliyaan dhibaatooyinkooda iyada oo ay ugu wacan tahay isku soo noqnoqoshada cajiibka ah.
Qaar ka mid ah serendipities cajiib ah
Haddii ay dhacdo in aysan wali kuu caddayn waxa ereygan macnihiisu yahay, halkan waxaa ku yaal xoogaa serendipities cajiib ah oo tusaale u noqon kara:
Lpenicillin waxaa lagu soo helay si kadis ahMarkii Alexander Fleming, oo baranayay dhaqammada bakteeriyada, uu lahaa dhaqan ay ku sumoobeen fungus.
Imaatinka Columbus ee Ameerika Sidoo kale waxaa loo qaadan karaa degenaansho, maadaama wixii uu raadinayay uu ahaa Hindiya.
Jade Semachrysa, oo ah nooc ka mid ah chrysopid oo aan la aqoon illaa 2011, waxaa laga dhex helay Flickr gallery! Sawir qaadaha ayaa si kadis ah uga qaaday sawirkiisa.
Waxaa laga yaabaa serendipity-ka ugu caansan sanadihii ugu dambeeyay waa kan buugga Indhaha mugdiga ah, kaas oo 1981 ka hadlay fayras dilaa ah kaas oo lagu sii daayay Wuhan sanadka 2020.
Fikradaha qaarkood ee loogu talagalay tattoo
Jade Semachrysa ayaa si kadis ah ku helay (Fuente).
Haddii aad xaqiiqdii rabto inaad hesho tattoo serendipitous, waxaad dooran kartaa naqshad kaas oo jilaayaashu si sax ah u tahay ereyga serendipity. Waxaad dooran kartaa font sidaad u jeceshahay oo xitaa aad u raacdo naqshadeynta midabada ama walxaha yaryar.
Haddii lid ku ah, waxaad dooneysaa inaad hesho naqshad balaaran, waxaad dooran kartaa inaad xasuusato xoogaa caan ah oo caan ah. Tusaale ahaan, sawir qaadista dhalada penicillin ama Jade Semachrysa waa tusaalooyin xasiloonida oo aan lagu kala soocin jaleecada hore.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan tattoo serendipity uu adiga xiiso kuu ahaa. Noo sheeg haddii aad leedahay noocyo sidan oo kale ah faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoo Serendipity, ka ogow wax walba oo ku saabsan ereygan xiisaha leh
Tattoos qurux badan oo qurux badan, marka cabirku uusan macno lahayn
Qoyska 4 tattoos, fikrado yar oo dhiirigelin ah